Soo dejisan Mail.Ru 5.3.0.19873 – Vessoft
العربية, English, Українська, Français (Canada)...
Soo dejisan Mail.Ru
Mail.Ru – software ah in ay la shaqeeyaan sanduuqyada boosta kala duwan. Software ayaa ku siinayaan shaqada la Google, yandex, Yahoo, Outlook, Rambler iyo adeegyada kale ee mail caanka ah. Mail.Ru ogolaanaya inaad la xiriirto asxaabtaada, files sarrifka, photos aragtida iyo aad u hesho wixii ogeysiin ah. Mail.Ru taageertaa tiro badan oo ah xisaab in bixisaa ku biiro haboon u dhexeeya shaqada iyo mail shakhsi ahaaneed ee isticmaala ah. Mail.Ru kale oo ku jira qaybaha kala duwan ee farriimaha soo socda kaas oo aadna ku badbaaddeen xusuustayda qalab iyo diyaar u ah aragtida aan la xiriira internet ah.
La shaqee adeegyada mail kala duwan
Shaandhaynta farriimaha soo socda
Taageerada xisaab badan
.Wadashaqayntaas Koonto u dhexeeya qalabka
Codsiyada la dhisay-in
Comments on Mail.Ru:
Mail.Ru Software la xiriira:
E-mail Qalab ku haboon maamulka email ah. Software ayaa si toos ah go'aansan emails by muhiimadda ay leedahay oo kuu ogolaanaya in aad si deg deg ah ay tirtirto ama fariimaha archive.
العربية, English, Українська, Français... Yahoo Mail 5.3.1
E-mail Software si ay u maareeyaan boostada ka adeega Yahoo. Codsiga intuitively qaybisaa farriimo cusub ee galay qaybaha kala duwan la daawado dheeraad ah oo ku haboon.
English, Français, Español, Deutsch... Gmail 6.10.23.137993986
العربية, English, Русский, Bahasa Indonesia... Dolphin Browser 11.5.15
Kadib Browser Fast u Browsing web haboon. Software waxay leedahay mid ah muuqaalada waxtar leh u joogtid raaxo online.
العربية, English, Français, Español... Deer Hunter 2.11.7
Games Aadan Qabille Ciyaarta inuu ugaadh noocyo kala duwan oo xayawaanka duurjoogta ah kala duwan ee meelaha qalaad. Sidoo kale kulanka waxaa ku Arsenal badan oo hub ah kaas oo loogu talagalay Hababka kala duwan ee ugaarsiga.
English, Français, Español, Deutsch... Avira AntiVir 4.5
English, Español, Deutsch, 中文... 4shared Desktop 3.49
Files Tool ee helitaanka iyo maaraynta xogta adeegga 4shared. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan xisaabtaada iyo inuu u ciyaaro files warbaahinta.
العربية, English, Українська, Français... Google Drive 2.3.283.31.33
Files The kaydinta daruur caanka ah in ay is dhaafsadaan oo la shaqeeya files oo kala duwan. Sidoo kale software awood u siiyaan in ay helaan files si ay dadka kale ee u edit ee wadajirka ah.
العربية, English, Українська, Français... Truecaller 7.71
Qaar kale waxay Software ayaa lagu ogaado macluumaad Yeedhe qaarkood. Software ayaa awood u si loo ogaado tirada qarsoon wicitaanka soo socda, SMS block basaasa lambarada taleefanada ee emaillada ah.
العربية, English, Українська, Français... Hay Day 1.31
Games Ciyaar caan ah oo maamulka beeraha iyo horumarinta beeraha. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ku beeri dalagyada kala duwan, guryo la dhiso iyo in xayawaanka.
العربية, English, Français, Español... CCleaner 1.16.62
العربية, English, Українська, Français... YouTube 11.41.56
العربية, English, Українська, Français... MX Player 1.8.10
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka caanka ah inuu u ciyaaro badan oo qaabab video ee tayo sare leh. Software ka furmay fursadaha ballaaran si astaysto inta lagu jiro daawashada ah ee video files.